Nsonaazụ kachasị elu nke kachasị elu / akara ala - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeFree Forex IndicatorsNjirimara nke kachasị elu kachasị elu / akara ala
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Free Forex Indicators, Njirimara nke kachasị elu kachasị elu / akara ala 5
Onu ogugu kachasi elu nke kachasi elu / ihe omuma maka ala ahia ahia ahia
N'isiokwu a, anyị na-ewetara uru atụmatụ ahia ụbọchị jiri ya Ugboro abụọ kacha elu / akara ala.
Nzuzo ndi a dabere na echiche ezi uche di iche iche, ichikota otutu ihe ndi n'eme ka ha nwee ike ime ka ha buru uzo nke ga eme ka ndi mmadu nweta ahia.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mma Ngosipụta ngosi iji nye ama oghere dị ịrịba ama maka usoro aghụghọ ndị a magburu onwe ha taa.
"A ghaghị ime ka ihe niile dị mfe dị ka o kwere mee, ma ọ bụghị ihe dị mfe." - Albert Einstein
The Njirimara nke kachasị elu kachasị elu / akara ala ga-ewere ọtụtụ ihe ị ga-eji na-emepụta ihe na nsonaazụ dị egwu nke usoro ịzụ ahịa kwa ụbọchị.
Enweela ihe karịrị otu puku ndị ahịa na-eji akara ahụ ugbu a. Ihe nhazi nke a nabatara n'oge a abughi nke oma.
Ọtụtụ ndị ahịa ihe dị mfe na-atụ n'anya nke atụmatụ ahia ụbọchị ahụ nakwa dị ka ihe ịrịba ama magburu onwe ya nke egosipụtara FREE.
Onu ogugu kachasi elu nke kachasi elu / ihe omuma maka ala ahia ahia ubochi
Ya mere, gịnị ka egosiputa na-egosi?
Ọ bụ ihe a maara nke ọma na ahịa na-emekarị, na-eme ka ọ dị ala, ma ọ bụ na-agafe ụzọ; ndị a bụ ihe ịtụnanya na-eme n'oge niile; na ndị na-achịkwa mmegharị ahụ bụ ego ego.
Ihe nke Njirimara nke kachasị elu kachasị elu / akara ala ime bụ ịchọpụta ihe a na-akpọ "Adịgboroja Breakouts" pụtara dị ka "Ugboro abụọ" or "Ụkwụ Abụọ". Ihe mgbaàmà dị otú ahụ na-eme mgbe ego ego na-agbanwe usoro nduzi.
Ihe osise ndị a na-egosi usoro ngbanwe ndị e mepụtara mgbe ego ego na-agbanye ntụziaka nke omume:
N'iburu n'uche nke a Ngosipụta ngosi na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke downloads, onye mmepụta nwere ike ịkwụsị inye ya.
N'ezie, ebe ọ bụ na ihe ngosi ahụ na-arụ ọrụ n'oge niile, enwere ike iji ya maka ahia ahia ụbọchị yana ogologo azịza ahia. Ọzọkwa, nke Njirimara nke kachasị elu kachasị elu / akara ala na-arụ ọrụ n'ime ala niile ahịa ego mmiri dịka Forex, Commodities, Stocks and Indices. Kedu ka nke a ga-esi kwe omume?
Ngosipụta ọrụ na-arụ ọrụ n'ebe niile n'ihi otu eziokwu: ahịa ego niile na-achụpụ ahịa ahịa niile n'otu ụzọ ahụ.
Onu ogugu abuo elu / ala na-aru oru n'uwa dum n'ihi na o na eme ihe usoro a na-adịghị agwụ agwụ nke esi arụ ego ego:
3. Mgbanwe nke oge
"Ọ bụrụ na ị maara onye iro ma mara onwe gị, ị gaghị atụ egwu ihe kpatara otu narị agha. Ọ bụrụ na ị maara onwe gị ma ọ bụghị onye iro, maka mmeri ọ bụla ị ga - enweta, ị ga - enwekwa mmeri. Ma ọ bụrụ na ị maghị onye iro ahụ ma ọ bụ onwe gị, ị ga-adaba n'ọgụ ọ bụla. " - Sun Tzu, The Art of War
Onu ogugu kachasi elu nke kachasi elu / ihe omuma maka ala ahia
Vidio na-esonụ na-egosipụta njirimara arụmọrụ nke njirimara. Ị ga-ahụ nke ahụ site na Ihe ngosi 35, na ihe ize ndụ 2% ọ bụla ahia, ị nwere ike nweta 128% uru! Ma ọ bụghị nke ahụ, ịnwere ike ịkwalite mmemme ahụ, ya mere, ị ga-emekwu ka ihu gị na-emeri, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ịzụ ahịa gị site na ịgbakwunye na itinye ụkpụrụ echiche ziri ezi na ihe ntanetị aka nyere site na nchịkọta FREE. Nke a bụ ihe anyị na-aga ime ọzọ.
Atụmatụ ahia ahia ụbọchị na ihe ngosi a
Ugbu a, anyị ga-elebakwu anya na atụmatụ ọnụọgụ abụọ jikọta ọnụ ọgụgụ dị iche iche na otu nnukwu onu. Iji mezuo nke a, ị nwere ike ịmụta a elu ala, ebe ị na-ere ahịa nanị nrịbama na okpokoro ala ndị na-ekwekọ na nnukwu foto ahụ, nchọpụta nke ka njọ na-eme n'oge okpokoro dị elu.
Dị ka ọmụmaatụ, otu ụzọ kachasị elu bụ iji nyochaa ọnọdụ ndị dị na okpokoro oge dị elu site na ịbịaru ntaneti n'usoro oge D1 na H4. N'ikpeazụ, ahia bụ naanị akara ngosi na H1, M30, M15 na M5 bụ naanị na ntụziaka nke usoro na-emekarị, na iji mee ka ihu gị na-emeri, ahia naanị ndị ahụ egosi na ọ na-eme ozugbo n'ahịrị na-emekarị ma ọ bụ dị nso.
Ugboro abụọ / Mpempe ala n'okpuru Right Line Line
Ụfọdụ n'ime setups kacha mma na ị nwere ike ịzụ ahịa Ugboro abụọ na Mkpụrụ na-eme ozugbo na usoro nhazi.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ọnụọgụ ego na-ajụ ozugbo site na ụdị ntanetị wee na-aga n'ihu n'ihu. Ọnụ gị nke na-emeri emeri na-akawanye mma ma ọ bụrụ na ị na - enweta okpukpu abụọ ma ọ bụ tinye aka na ntanetị.
N'ihi na nke a na-abụkarị nkwenye n'oge na ọkwa nke na-aga n'ihu na-amalite. Ma uru nke nrịba ama dị otú ahụ dị ukwuu karị n'ihi na e nwere ọtụtụ ohere maka nnukwu ọganihu.
a) Isi okpukpu abụọ kpọmkwem na nhazi usoro:
b) Ugboro abụọ n'elu kpọmkwem na akara ngosi:
Ihe Nlereanya Na-egosiputa Agbanwe
Ntụle ihuenyo na-esonụ na-egosipụta usoro nkwụsị na-adọrọ mmasị na H4 oge etiti. N'ebe akara a na-acha akwụkwọ ndụ na-adaba ebe ọnụahịa na-emetụ ụda na-emekarị, a na-egosi akara ngosi abanye abụọ na obere oge.
Nteta ihuenyo ọzọ ga-egosi ntinye ntinye nke mere na H1 oge oge ozugbo na usoro a na - emekarị:
Ugboro abụọ na ite dị nso n'ahịrị
Ugboro ugboro na ala ndị na-eme na akara na-emekarị bụkwa ihe setups dị mma. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọnụahịa metụrụ aka ma ọ bụ bịa nso na-emekarị akara nke na-abịakwute oge D1 ma ọ bụ H4, na ebe ọzọ na-aga n'ihu na mpaghara nke na-emekarị amalite. A pụrụ iji anya nke uche hụ mmalite nke ọganihu na-aga n'ihu site na enyemaka nke Heiken Ashi na egosi H4 oge.
Mgbe Heikin Ashi kwenyesiri ike na akụkụ nke ọzọ ga-aga n'ihu, ị ga-ele anya maka akara elu / ala abụọ na okpokoro oge dị ala, M5 na H1, bụ ndị na-ahụ maka usoro na-emekarị n'oge dị elu. Ogugu / nkwado ebe kacha nso dị anya. Ya mere, nrịbama ndị dị otú ahụ ga-enwe nnukwu uru maka na enwere ohere karịa ọnụahịa ịkwaa tupu ịkụda mpaghara nnọchigide / nkwado.
a) Ugboro abụọ iwu ahia:
Dịka e gosipụtara, a na-akwụ ụgwọ ego site n'aka ụzụ na-eche ihu. Ozugbo Heiken Ashi nke oge H4 gbanwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ihe na-egosi na ọnụahịa ahụ emetụtala na usoro ahụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-elele akara ngosi ala okpukpu abụọ na ala oge H1, M30, M15 na M5.
b) Iwu abụọ n'elu trading iwu:
Dịka e gosipụtara, a na-akwụ ụgwọ ego site na ụzụ na-emekarị ruo ala. Ozugbo Heiken Ashi nke oge H4 gbanwere uhie, ọ bụ ihe na-egosi na ọnụahịa ahụ emetụtala na usoro ahụ. Ị ga-echere maka akara aka abụọ n'elu okpukpu ala nke H1, M30, M15 na M5.
Ihe ngosi karia karia ihe omuma nke otu uptrend
Ntụle ihuenyo na-esonụ na-egosipụta usoro ịrị elu na H4 oge etiti. Ọnụahịa bịara nso n'ahịrị na-emekarị, a jụziri ya n'akụkụ. N'oge a na-agagharị agagharị, nke a na-akpọ ya na ahihia akwụkwọ ndụ, a na-egosi nrịba ama abanye abụọ na oge M5.
Igwefeta ihuenyo na-esonụ na-egosipụta akara ntinye na M5 oge etiti:
Ngosipụta a na - achọpụta ezigbo "Ntọala abụọ / elu" ntọala. Site na njirimara a, ị nwere ike ịbanye na mmalite n'ime nnukwu ọnọdụ. Ị nwere ike ịmepụta arụmọrụ n'ụzọ dị ịrịba ama site n'ịzụ ahịa naanị na ntụziaka nke nnukwu njọ.
Ezi ihe adịghị mkpa mgbagwoju anya. Site na iji akara a, ọbụna ahia ụbọchị nwere ike ịbara gị uru!
Nweta akwukwo a nke kachasị elu nke kachasị elu / akara ala
Ụdị na-aga n'ihu ugboro abụọ
Mgbanwe nke oge
2 Nza aza
4 Kedu ndị edemede
AKWỤKWỌ NDỊ NA-AKỤKWU NDỊ NA-ECHICHE NDỊ NKWU ỤBỌCHỊ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ Ezigbo onye ahịa ahịa Forex, NEWS! Onu ogugu kachasi elu nke abuo elu / ihe omuma maka ala maka ahia ahia ahia. Inwetakwu ihe omuma na bonuses ebe a: https://www.bestforexeas.com/free-ultimate-double-top-bottom-indicator/ N'isiokwu a, anyị ga-eweta usoro ahịa ahia ụbọchị na-eji Ntucha Elu nke Abụọ / Ala. Nzuzo ndi a dabere na echiche ezi uche di iche iche, ichikota otutu ihe ndi n'eme ka ha nwee ike ime ka ha buru uzo nke ga eme ka ndi mmadu nweta ahia. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ihe ngosi mara mma iji nye ihe nrịba ama dị ịrịba ama maka usoro azịza ndị a magburu onwe ha taa. "Ihe nile kwesiri ime ka o di mfe... GỤKWUO "
Echere na usoro nke a nwere ike ịmepụta ya ...?
Nke a ọ ga-eme?
Ndewo Matt, Daalụ maka mmasị gị na "ULTIMATE TOP / BOTTOM INDICATOR"! IHE A GA-EME AKWỤKWỌ NDỊ AHỤ AKWỤKWỌ: Ihe ngosi a na-achọpụta na ị bara ezigbo uru "Ntọala abụọ / elu" setups. Site na njirimara a, ị nwere ike ịbanye na mmalite n'ime nnukwu ọnọdụ. Lelee vidiyo nke gosiri na onye ngosi ahụ nwere ike ime ka 128% nweta uru naanị na 35 ahịa ma ọ bụrụ na ị tinyere ọnwụ 2% kwa ahia. Nweta ozi ndi ozo ebe a: https://www.bestforexeas.com/free-ultimate-double-top-bottom-indicator/ NKWU NDỊ Ị GA-AJỤJỤ NA MGBE NDỊ ỌZỌ A: Mike Semlitsch - onye mmepụta nke usoro ahia a ga-emepụta 2 Ngwá ngwọta ọkara na-adịghị anya. - A ga-egosipụta ntanetị ahụ n'ihu akara DTDB.... GỤKWUO "
Enwere m ike ịbụ ihe na-ezighị ezi, ma otu ihe ahụ na-egosi na ọ bụ n'efu na MT4 "ahịa", ma ọ na-ekwu naanị ọrụ na EURUSD na GBPUSD. O doro anya na ị jidere nke ahụ?
Hey ebe, Ekele gị maka mmasị gị na "ULTIMATE TOP / BOTTOM INDICATOR"! IHE A GA-EME AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ AKWỤKWỌ AHỤ NA AJỤJỤ gị: A na-emepụta ihe ngosi a iji chọpụta ihe mgbapụta dị elu nke nwere ike ịbụ: Nkpukpu abụọ / N'ala na adịgboroja breakouts. Ugboro abụọ a na - emepụta nke a bụ nke ego ego na - ejikọta ya. Site na nkpuchi ego bu ego ndi ego n'adighi ahia. Mgbe ahụ, smart ego na-agbanwe ntụziaka dị nnọọ mma. Ndị ahịa na-ejide onwe ha na-atụ ụjọ ma pụọ ​​n'ọkwá ha ma ọ bụ na-agbanwe ọnọdụ ha. Nke a na-eme ka mgbanwe ahụ dị oke... GỤKWUO "